corporate development Bank Limited(corporate development Bank Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले आज चैत १६ गतेबाट अवितरित हकप्रद सेयर लिलामीमार्फत बिक्रीमा राखेको छ। बैंकले गत माघ ७ गतेदेखि फागुन १३ गतेसम्म हकप्रद बिक्री गरेको थियो। त्यतिबेला बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहको १ लाख २० हजार १२० कित्ता सेयर बैंकले लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरमा इच्छुक जोकोही व्यक्ति तथा संस्था...
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज फागुन १३ गते अन्तिम मौका रहेको छ। बैंकले गत माघ ७ गतेबाट चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँको १ः.१.५ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको हो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख कित्ता हकप्रद जारी गरेको छ। यो हकप्रदमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन पाइने धितोपत्र बिक्री...
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा आवेदन दिने म्याद थप, अब कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडका अनुसार अब यो बैंकको हकप्रदमा फागुन १३ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। यसअघि आवेदन अन्तिम म्याद आज माघ २७ गते बैंकिङ समयसम्म भनिएको थियो। बैंकले गत माघ ७ गतेबाट आफ्ना �...
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ७५.७८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष पनि यही अवधिसम्म बैंकले १ करोड २७ लाख...
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आज माघ ७ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि १५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ। बैंकले चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँको १ः.१.५ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको हो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख कित्ता हकप्रद जारी गरेको छ। यो हकप्रदमा सेयरधनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति...
काठमाण्डौ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै यो बैंकको प्रतिकित्ता ४५४.८० रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ९८७ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो बैंकको सेयर...
आजसम्म कायम सेयरधनीहरुले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १५०% हकप्रद भर्न पाउने
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन योग्य हुने आज पुस २५ गते अन्तिम मौका रहेको छ। बैंकले आउँदो माघ ७ गतेबाट निष्कासन गर्न लागेको १५० प्रतिशत हकप्रदका लागि भोलि पुस २६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज पुस २५ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो बैंकको हकप्रद भर्न योग्य हुनेछन्। बैंकले...
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १५०% हकप्रदमा माघ ७ बाट आवेदन खुल्ने
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आउँदो माघ ७ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ। बैंकले चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँको १ः.१.५ अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने भएको हो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख कित्ता हकप्रद जारी गर्नेछ। यो हकप्रदमा सेयरधनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट...
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले पाए हकप्रद निष्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले दुई कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको छ। सेबोनले आज पुस १ गते छ्याङ्दी हाइड्रोपावर र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको हो। सेबोनको अनुमति पाएसँगै छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले १०ः३ को अनुपातमा ८ करोड ९३ लाख २ हजार ५०० रुपैयाँबराबरको हकप्रद जारी गर्नेछ।...
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो १३ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो असार २५ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा वीरगन्जस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा बिहान ७ः३५ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा...
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सेयर बजार बलियाभन्दा पनि कमजोर कम्पनीका सेयरभाउ उचालिन थालेको छ। लगानीकर्ता पनि सुनियोजित ढंगले मूल्य बढाइने कम्पनीको सेयरमै लगानी गरेर भेँडोपन देखाइरहेका छन् । हरेक बुलिस ट्रेन्डमा बलिया कम्पनीभन्दा कमजोर कम्पनीहरुको भाउ सोचेभन्दा बढी उकालो लाग्नु स्वाभाविकजस्तै देखिन थालेको छ। तर यस्तो बेला सोझासाझा...
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले १ः१.५ अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने, बोर्डसँग माग अनुमति
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले हकप्रद निष्कासन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। बैंकले १ः१.५ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा गत पुस २६ गते निवेदन दिएको हो। बैंकले १ सेयर थप १.५ नयाँ सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो। बैंकले कुल ३० लाख हकप्रद निष्कासनका लागि...